June 26, 2019 - CeleLove
ချစ်သူကို ကောင်းစေချင်တဲ့သူတွေတိုင်းမှာရှိတဲ့ အတ္တ (၅) ခု
June 26, 2019 Cele Love 0
ချစ်သူကို ကောင်းစေချင်တဲ့သူတွေတိုင်းမှာရှိတဲ့ အတ္တ (၅) ခု ချစ်သူကို ကောင်းစေချင်တာ၊ အဆင့်မြင့်မြင့်နေစေချင်တာ တကယ်ချစ်တဲ့သူတိုင်းမှာ ရှိတဲ့ ဆန္ဒတစ်ခုပါ။ ချစ်သူကို ကောင်းစေချင်စိတ်တွေများလာတဲ့အခါ ကိုယ့်ရဲ့ ဆန္ဒတွေဟာ အတ္တတွေ ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။ ခုဖော်ပြပေးမှာကတော့ ချစ်သူကို ကောင်းစေချင်တဲ့ သူတိုင်းမှာရှိတဲ့ အတ္တတွေပဲဖြစ်ပါတယ် ….. ။ (၁) […]
သူသင့်ကိုတကယ်ချစ်တာမဟုတ်ဘဲ အပျင်းပြေလာပတ်သက်နေမှန်းသိသာနေတဲ့အချက်(၆)ချက် အခုခေတ်မှာ ရည်းစားစကားပြောဖို့ဆိုတာ ရေထသောက်တာထက်တောင် ပိုလွယ်ပြီး ၊ ပိုသက်တောင့်သက်သာရှိနေတဲ့ အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ ကိုယ့်ကို လာပတ်သက်တဲ့သူတစ်ယောက်ဟာ ကိုယ့်ကိုရမလားဆိုပြီး သွေးတိုးစမ်းတာလား၊ အပျင်းပြေရောရင်း ရရင်အမြတ်ပဲလို့သဘောထားနေတာလား၊ လာကစားနေတာလား၊ တကယ်ပဲကြွေနေတာလားဆိုတာ ခွဲခြားဖို့ခက်ခဲပါတယ်။ ဒီတော့ ကိုယ့်ကိုလာပတ်သက်နေတဲ့သူက တကယ်ချစ်တာမဟုတ်ဘဲ ကစားရုံသက်သက်၊ သွေးတိုးစမ်းရုံသက်သက်ပဲရည်ရွယ်တယ်ဆိုတာ ဒီအချက်တွေက […]
ပရလောကသားများ ကြီးစိုးနေတဲ့ ရန်ကုန်-ပြည်အဝေးပြေးလမ်းမပေါ်က မိုင်တိုင် ၈၆ (ဖြစ်ရပ်မှန်)
ပရလောကသားများ ကြီးစိုးနေတဲ့ ရန်ကုန်-ပြည်အဝေးပြေးလမ်းမပေါ်က မိုင်တိုင် ၈၆ (ဖြစ်ရပ်မှန်) ရန်ကုန်-ပြည်အဝေးပြေးလမ်းမကြီးရဲ့ဒီနေရာ လက်ပံတန်းမြို့မှကြိုဆိုပါ၏ ဆိုတဲ့မြို့နယ်အစ ဆိုင်းဘုတ်တင်ထားတဲ့ ၈၆ မိုင် ကနေ ၈၇/၈၈/၈၉ ၃မိုင်လောက်အကွာဝေး ချမ်းသာကုန်းဆိုတဲ့ရွာလေးကိုတွေ့ရင် ကားသမား/ဆိုင်ကယ်သမားများ အထူးသတိထား မောင်းနှင်ကြပါရန်လေးစားစွာသတိပေးပါရစေ ….. ။ လမ်းကိုကြည့်ပါ ဖြူးဖြောင့်ပြီးမျက်ကွယ်မရှိပါ။ သို့သော်အဲဒီလမ်းပိုင်းလေးမှာ မျက်ရည်ကျခဲ့ရတဲ့မိသားစုတွေ […]
ငွေကျပ်သိန်း (၁၀၀) နီးပါး CB ဘဏ်အကောင့်မှ လက်သည်မပေါ်ဘဲ ပျောက်ဆုံး ….
ငွေကျပ်သိန်း (၁၀၀) နီးပါး CB ဘဏ်အကောင့်မှ လက်သည်မပေါ်ဘဲ ပျောက်ဆုံး …. မနက်အိပ်ရာထတာနဲ့ ဖုန်းဘေဖြည့်ဖို့ Cb pay app ထဲလည်းဝင်လိုက်ရော ငွေတွေဖြတ်ထားတာ Transactions တွေအများကြီး။ စုစုပေါင်း သိန်းတစ်ရာပြည့်ဖ်ို့ ၂၀၀ ပဲလိုပါတယ်။ 9990,800 ကျပ်ပါ။ Transactions 14 […]
ညဘက်တွင်ပြုလုပ်လေ့ရှိသော ကိုယ်အလေးချိန်တက်စေသည့် အလေ့အကျင့်ဆိုးများ…
ညဘက်တွင်ပြုလုပ်လေ့ရှိသော ကိုယ်အလေးချိန်တက်စေသည့် အလေ့အကျင့်ဆိုးများ… အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ။ ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားလှပချင်သူတွေ ကိုယ်အလေးချိန်လျော့ချချင်သူတွေအနေနဲ့ အစားအသောက် ဆင်ခြင်သင့်သလို ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွှတ်တဲ့အပြုအမူတွေ ပြုလုပ်ဖို့လည်း လိုအပ်ပါတယ် … ။ စာဖတ်သူတွေအနေနဲ့လည်း အစားလည်းလျော့ပါလျက်နဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းလည်း ပုံမှန်ပြုလုပ်ပါလျက်နဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်မကျသေးဘူးဆိုရင် အခုဖော်ပြသွားမယ့် အလေ့အကျင့်တွေထဲက ဘာတွေကို ကျူးလွန်မိနေလဲဆိုတာ သေချာစဉ်းစားဖို့လိုပြီနော် …. […]
ဘာကိုမှမကြောက်တတ်၊ ဘာကိုမှဂရုမစိုက်တတ်တဲ့ ရာသီခွင်(၄)မျိုး ရာသီခွင်တွေထဲမှာ ဘာတွေပဲဖြစ်လာဖြစ်လာ ဂရုမစိုက်တတ်တဲ့၊ တကယ်လို့ ဂရုစိုက်နေရင်တောင် အဲ့ဒါကိုမဖော်ပြဘဲ ဘာမှမဖြစ်သလိုနေတတ်တဲ့သူတွေရှိပါတယ်။ ဘယ်သူတွေဘာပြောပြောသိပ်ဂရုစိုက်မနေဘဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပဲဂရုစိုက်တယ်၊ ကိုယ့်ကိုမလေးမစားလုပ်လာတာတွေကို လုံးဝဂရုမစိုက်တတ်တဲ့၊ ကိုယ့်ကိုတိုက်ခိုက်တာတွေကို လုံးဝအဖက်မလုပ်တတ်တဲ့ရာသီဖွားတွေကတော့ သူတို့လေးတွေပါပဲနော် …. ။ (1) Aries ( Mar 20- Apr […]
ရုပ်ရည်ချောမောလှပတဲ့သူတွေပဲ နားလည်နိုင်မယ့် စိတ်ညစ်စရာ (၇) ချက်
ရုပ်ရည်ချောမောလှပတဲ့သူတွေပဲ နားလည်နိုင်မယ့် စိတ်ညစ်စရာ (၇) ချက် ရုပ်ရည်ချောမောလှပတာဟာ ဘုရားသခင်ပေးတဲ့ ဆုလာဘ်တစ်ခုပါ။ ဒါပေမယ့်လည်း အရာရာတိုင်းမှာ အကောင်း နဲ့အဆိုး ဒွန်တွဲနေသလိုပဲ ရုပ်ရည်ချောမောလှပသူတွေမှာ ကြုံရတတ်တဲ့ အခက်အခဲလေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ် .. …. ။ (၁) ရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာ လူတွေရဲ့ အာရုံစိုက်ခြင်းကို မခံချင်ပဲလည်း […]
အစဉ်ရှောင်ကြဉ် ကြရမည့် ဘုန်းကံနိမ့်စေ လာဘ်ပိတ်စေသော အလေ့ဆိုးများ ၁။- ဘုရားခန်းတွင် လင်မယား (၂)ယောက် မအိပ်ရ …. ။ ၂။- ယောကျာ်း၏ ညာဘက်တွင် မိန်းမ မအိပ်ရ …. ။ ၃။- နံနက် (၄) နာရီခွဲမှ (၆) နာရီအတွင်းတွင် […]
ယောက်ျားလေးများ ယူသင့်သော မိန်းမ (၁၀) မျိုး (၁)အနာရောဂါကင်းရှင်းပြီး အနေအထိုင်သိမ်မွေ့ သန့်ရှင်းသော မိန်းမ …. (၂)မိဘအား ပြုစုလုပ်ကျွေးလိုစိတ်ရှိပြီး ကိုယ့်ထက်အကြီးများအား လေးစားစွာ ဆက်ဆံတတ်ပြီး ကိုယ့်ထက် အငယ်များအား အရာရာနားလည် ထိန်းကျောင်းပေးတတ်သော မိန်းမ …. (၃)ပုံမှန်အားဖြင့် ယောကျာ်းဆို စိတ်မ၀င်စားတတ်.. ကိုယ်နဲ့တွေ့မှ […]
ဇက်ကြောတက်တာကို ရက်ပိုင်းအတွင်းသိသိသာသာ ပျောက်ကင်းပါစေတဲ့ဆေး
ဇက်ကြောတက်တာကို ရက်ပိုင်းအတွင်းသိသိသာသာ ပျောက်ကင်းပါစေတဲ့ဆေး ဇက်ကြောတက်ပျောက် ဆေးနည်း …. ရှောက်သီးတလုံးကို အ၇ည်ညှစ်ယူပါ။ပြီးနောက် အခွံ၊ အစေ့၊ အရည် သုံးမျိူးးလုံးကို ဇလုံတခု ထဲထည့်ပါ၊ဆား နည်းနည်းထဲ့ပြီး ပွက်ပွက်ဆူနေသော ရေနွေးဖြူ ၂လီတာ ခန့် ထည့်ပြီး အအေးခံပါ၊ နံနက် တကြိမ် အိမ်ရာဝင်တကြိမ် […]